September 23, 2021 - Khitalin Media
September 23, 2021 by Khitalin Media
Zawgyi ကမ္ဘာမှာထောင်ကျနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာထောင်ကြနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာမှာပဲရှိ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုချီးမြင့်ခံခဲ့ပါတယ်။၆နှစ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံထားရပြီး၁၉၉၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ပြည့်လည်လွှတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့ ကနေ့၁၉ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ Oldenburg InternationalFilmFestivalရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကSeymour CasselAwardForOutstandingPerformanceသရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ Unicode ကမ္ဘာမှာထောင်ကျနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာထောင်ကြနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာမှာပဲရှိ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုချီးမြင့်ခံခဲ့ပါတယ်။၆နှစ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံထားရပြီး၁၉၉၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ပြည့်လည်လွှတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့ ကနေ့၁၉ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ Oldenburg InternationalFilmFestivalရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကSeymour CasselAwardForOutstandingPerformanceသရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ Credit Zawgyi ကမ္ဘာမှာထောင်ကျနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာထောင်ကြနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာမှာပဲရှိ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုချီးမြင့်ခံခဲ့ပါတယ်။၆နှစ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံထားရပြီး၁၉၉၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ပြည့်လည်လွှတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့ ကနေ့၁၉ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ Oldenburg InternationalFilmFestivalရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကSeymour CasselAwardForOutstandingPerformanceသရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ Unicode ကမ္ဘာမှာထောင်ကျနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာထောင်ကြနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာမှာပဲရှိ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုချီးမြင့်ခံခဲ့ပါတယ်။၆နှစ်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံထားရပြီး၁၉၉၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ပြည့်လည်လွှတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့ … Read more
ပြေတီဦးနှင့် အူဝဲတို့အတွက် မင်္ဂလာသတင်းလေးပါပဲဗျာ
ပြေတီဦးနှင့် အူဝဲတို့အတွက် မင်္ဂလာသတင်းလေးပါပဲဗျာ မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ပြေတီဦးနှင့် အူဝဲ တို့ဟာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် ပြည်သူ့ဘက်ကနေ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ထောင်ထဲမှာ အဖမ်းခံထားရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပီး ဖြစ်မှာပါ အခုဆိုရင်တော့ ဦးတီတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းလေးကို ကြားသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီတစ်ခါ လွှတ်မယ့်အထဲမှာ ဦးတီတို့ နှစ်ယောက် ပါလာတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်…။ ဒီသတင်း အမှန်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ အူဝဲတို့ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံး လွတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…။ လေးစားစွာဖြင့် unicode ပြေတီဦးနှင့် အူဝဲတို့အတွက် မင်္ဂလာသတင်းလေးပါပဲဗျာ မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ပြေတီဦးနှင့် အူဝဲ တို့ဟာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် ပြည်သူ့ဘက်ကနေ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ထောင်ထဲမှာ အဖမ်းခံထားရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပီး ဖြစ်မှာပါ အခုဆိုရင်တော့ … Read more
PDF များအနေဖြင့် တာဝါတိုင်များ ဖျက်ဆီးခြင်း ၊ ပြည်သူများ လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြခြင်းများကို ရပ်တံ့ပေးပါက ဒီဇင်ဘာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးရန် အသင့်ရှိဟု ဇော်မဲလုံးပြော
PDF များအနေဖြင့် တာဝါတိုင်တွေ မဖျက်ဆီးဘူး၊ပြည်သူများအနေဖြင့်လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြခြင်းများရပ်တံ့ပေးပါက ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းရွှေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးရန်အိမ်စောင့်အစိုးရအနေဖြင့်အသင့်ရှိဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ပြေ PDFများအနေဖြင့်တာဝါတိုင်တွေမဖျက်ဆီးဘူး၊ပြည်သူများအနေဖြင့်လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြခြင်းများရပ်တံ့ပေးမည်ဆိုပါက ဒီဇင်ဘာလအတွင်းရွှေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးရန်အိမ်စောင့်အစိုးရအနေဖြင့်အသင့်ရှိနေ သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းမှ ယနေ့ပြောဆိုသည် ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကြီးကမိုင်တဲလ်မိုဘိုင်းနဲ့ရှင်သန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး။တွင်းထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး၊ရေနံ၊သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ရေထွက်ပစ္စည်းစတဲ့လုပ်ငန်းများစွာပိုင်ဆိုငထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ် ပါတယ်၊ မိုင်တဲလ် တာဝါတွေပြိုလည်းရုံနဲ့ တပ်မတော်ကြီးမပြိုလဲပါဘူး အဓိက ကျွန်တော်ပြောချင်တာက PDF တွေအနေနဲ့တာဝါတိုင်တွေကိုဗုံးခွဲဖြိုချနေတာတွေရပ်တန်းကရပ်ပေးမယ်ဆိုရင် နောက်ပြီး ပြည်သူတွေ လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြနေတာတွေရပ်စဲပေးမယ်ဆိုရင် ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းရွှေးကောက်ပွဲပြန် လုပ်ပေးဖို့အိမ်စောင့်အစိုးရအနေ ဖြင့်အသင့် အနေအထားပြင်ဆင်ထားပေးမယ်လို့အာမခံပါတယ်။… NUGအစိုးရအနေနဲ့လက်နက်နဲ့ပုန်ကန်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအိမ်စောင့်အစိုးရနဲ့စားပွဲဝိုင်းမှာလာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကလက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်နေရာအနှံ့ဗုံးခွဲနေတာဒီမိုကရေစီလား လို့ မေးစရာဖြစ်နေပါတယ တပ်မတော်အပေါ်အထင်အမြင်လွဲမှားစွာပြည်သူတွေမြင်နေကြတာတပ်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်၊တပ်မတော်ဆို တာတိုင်းပြည်ကိအန္တရာယ်များကြားကခက်ခက်ခဲခဲဆွဲတင်ကယ်မနေတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေ တနေ့နားလည်လာကြပါ လိမ့်မယ်တပ်မတော်သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရဲဇော် Unicode PDF များအနေဖြင့် တာဝါတိုင်တွေ မဖျက်ဆီးဘူး၊ပြည်သူများအနေဖြင့်လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြခြင်းများရပ်တံ့ပေးပါက ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းရွှေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးရန်အိမ်စောင့်အစိုးရအနေဖြင့်အသင့်ရှိဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ပြေ PDFများအနေဖြင့်တာဝါတိုင်တွေမဖျက်ဆီးဘူး၊ပြည်သူများအနေဖြင့်လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြခြင်းများရပ်တံ့ပေးမည်ဆိုပါက ဒီဇင်ဘာလအတွင်းရွှေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးရန်အိမ်စောင့်အစိုးရအနေဖြင့်အသင့်ရှိနေ သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းမှ … Read more
တနိုင်ငံလုံးက ဝိုင်းချစ်ကြတဲ့ အမေစုသမီး ချယ်ရီထက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်စွမ်းရည်သတ်မှတ်ချက်…
သူမအမည် ချယ်ရီထက်။ လူထုခေါင်းဆောင်အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနီးကပ် သက်ေ တာ်စောင့် ရဲမေ ချယ်ရီထက် ပစ်မှတ်ကို ၉၉%ထိအောင်ပစ်နိုင်သူ။ ဒီခလေးမကို စောင့်ကြည့်နေတာ အမေ့နားမှာ ကိုလင်းလင်းမရှိတဲ့အချိန်ထဲကပဲ။ စစ်အာဏာရှင်တွေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့ထဲကမို့ အမေ့နားရောက်တော့ ပိုလို့သတိထားစောင့်ကြည့်မိတယ်။ အမေ့နားမှာ တစ်စစနဲ့ ပြည်သူတွေသိလာကြ ချီးကျူးးလာကြပေမယ့် မယုံရဲတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ကိုယ့်မှာ မချီးကျူးးရဲခဲ့ဘူး။ ခုတော့.ဒေါ်လဲ့လဲ့မော် နဲ့ကိစ္စမှာ ဒီခလေးမလေးကို အပြစ်ပြောတဲ့သူတွေ တွေ့လာရတော့ မြင်သလောက်လေး ဒီခလေးမဘက်က ရပ်တည်ပေးချင်လာမိတယ်။ အမေသွားတဲ့ခရီးစဉ်တိုင်း ဘယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ လေယာဉ်ပေါ်အထိ တက်ကြို တာ မတွေ့ခဲ့ရဘူးသလိုပဲ။ မမြင်လိုက်မိတာလည်းဖြစ်မှာပါ။ အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်ချင်လို့ ဖားတဲ့အနေနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ပဲ လေယာဉ်ပေါ်ထိ တက်ချင်သလို တက်မယ်၊ ဆင်းချင်သလိုဆင်းမယ်ဆိုပြီး လုံခြုံရေးချိုးဖောက်ရလောက်တဲ့အထိ ဖြစ်လတာ့ ဒီခလေးမ အမြင်ကတ်သွားပုံ ရပါတယ်။ အမေ့နားမှာ နေသူမို့ … Read more
သူမလို အမှားမျိုး ပရိသတ်တွေ မမှားစေဖို့ ပရိသတ် တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း…
သူမလို အမှားမျိုး ပရိသတ်တွေ မမှားစေဖို့ ပရိသတ်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန် းကတော့ ယနေ့ထက်တိုင် ပရိသတ်တွေ ကြား နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များ နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး. . သူမဟာ နာမည်ကျော် အဆိုတော်အေ ာင်လနဲ့အတူ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင် ရေးလေးကို တည်ဆောက်ပိုင်ဆိုင်ထ ားနိုင်တဲ့သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အဆိုပညာ ပ ါရမီထူးချွန်လှလွန်းသူချည့်မို့ အရ မ်းကို လိုက်ဖက်လှတဲ့ အဆိုရှင်စုံတွဲ လို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားကြရသူ တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်းစုဟာ တစ်ချိန်က သီချင်းဗီဒီယို နှင့် ရုပ်ရှင်ကားများမှာ ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခုချိန်မှ ာတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ရပ်န ားထားပြီး သီချင်းသီဆိုဖျော်ဖြေမှု အပိုင်းကိုသာ ပို၍ … Read more
NUG အစိုးရကိုသာ အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်း တောင်ကိုးရီးယားပါတီဥက္ကဌပြော
NUG ကို အပြည့်အဝ ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည် (တောင်ကိုရီးယား အာဏာရပါတီ ဥက္ကဌ) မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်မပြုပဲ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုသာ အပြည့်အဝ ထောက်ခံ အားပေးသွားမယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အာဏာရ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Democratic Party of Korea) ရဲ့ ဥက္ကဌ မစ္စတာ ဆုန်ယောင်ဂီးက VOA နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောကြားလိ်ုက်ပါ တယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်က လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူ တွေရဲ့ဆန္ဒကို ကိုယ်ချင်းစာပြီး အခုလို အားပေးထောက်ခံနေရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ ကိုဉာဏ်ဝင်း အောင်က တင်ပြထားပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံအားပေးနေပြီး … Read more
23.9.2021 မှ 29.9.2021 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း မိမိအပေါ်တွင် မလိုသူများနေမည်။အထက်လူကြီးများနှင့် ပတ်သက်၍ နှလုံးစိတ်ဝမ်း မငြိမ်းချမ်းဘဲဖြစ် မည်။ မြင့်သောနေရာ သို့မဟုတ် တွင်း အနိမ့်ထဲသို့ မတော်တဆပြုတ်ကျတတ်မှုများ ဖြစ်စေတတ်ပါ၍ အထူးသတိထားပါ။ ရာထူးတိုးခြင်း၊ နယ်မြေသစ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်း များ ဖြစ်ပေါ် တတ်ပါတယ်။ ဩဇာအာဏာထက်မြက်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင်ပိုမိုရရှိခြင်းများ ဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏လိုလားမှုမှန်သမျှ ပြည့်စုံ စွာ ရရှိ နေပါသည်။ မိမိ၏လုပ်ငန်းများတွင် လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် အောင်မြင်မှုများ ရှိနေပါမည်။ အတွင်းရန်၊ အပြင် ရန်ဟူသမျှ ကင်းစင်ပျောက်ကွယ်သွားရပါလိမ့်မည်။ ငွေကြေးဥစ္စာများလည်း ထူးခြားစွာပိုင်ဆိုင်မှု တိုးတတ်ရ တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးညောင်းညာ ကိုက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ အနှိပ်ခံတာမျိုး၊ရေနွေးနဲ့ရေချိုးတာမျိုးဆောင်ရွက်ပေးပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်များဖြစ်ပါက အိမ်ထောင်ဖက်၏ ဩဇာ လွှမ်းမိုးခြင်းများ ခံရတတ်ပါ … Read more
“မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အဖိုးထိုက်ဆုံး အဆင်တန်ဆာဟာ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါပဲ”
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အဖိုးထိုက်ဆုံး အဆင်တန်ဆာဟာ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါပဲ” အိမ်ထောင်သည် မိန်းမတိုင်းဟာ မတင့်တယ်ကြပါဘူး ကိုယ့်ယောကျာ်းဟာဆိုးသွမ်းရိုင်းနေရင်ဖြစ်စေသောက်စားမူးရူးနေရင် ဖြစ်စေ စာရိတ္တ ပျက်ယွင်းနေရင်ဖြစ်ပါစေ အဲ့မိန်းမ ဟာ လူအများကြား သိမ်ငယ်နေရပြီး။ ဘယ်လောက်ပဲ ရွှေငွေတန်ဆာတွေဝတ်ဝတ် မတင့်တယ်ပါဘူး လူအများရှေ့ယောကျာ်းအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ မျက်နှာငယ်ရတယ် သိမ်ငယ်ရပါတယ်။ ယောကျာ်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းမဟာ ရွှေမရှိပါစေ ငွေမရှိပါစေသပ်သပ်ရပ်ရပ် နဲ့ အမြဲ တင့်တယ်ပီး အပြုံးပန်း တွေ ဝေနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဖိုးအထိုက်ဆုံး အဆင်တန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ Credit to Original writer Zawgyi “မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕အဖိုးထိုက္ဆုံး အဆင္တန္ဆာဟာ ေယာက်ာ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းပါပဲ” အိမ္ေထာင္သည္ မိန္းမတိုင္းဟာ မတင့္တယ္ၾကပါဘူး ကိုယ့္ေယာက်ာ္းဟာဆိုးသြမ္း႐ိုင္းေနရင္ျဖစ္ေစေသာက္စားမူး႐ူးေနရင္ ျဖစ္ေစ စာရိတၱ ပ်က္ယြင္းေနရ … Read more
ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့အတွက် ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဒီ(၁၀)မျိုးထဲက အနည်းဆုံး (၇) မျိုးလောက် တော့ နည်းနည်းစီပါ ပါတယ်။ အချိန်ယူပြီး ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုူ့တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ဘယ်လို မိန်းကလေးမျိုးကို ယောက်ျားများ ကြောက်ကြပါသလဲ။ မိန်းကလေး တိုင်း (၁၀)မျိုးထဲတွင် တစ်မျိုးမက နှစ်မျိုး ပါဝင်နေမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင်။ သင်သည် ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးလဲ ကိုယ်ကို သုံးသပ်ဖူးပါသလား။ (၁) ညစ်ပတ်သောမိန်းမ ညစ်ပတ်သောယောက်ကျားမှာ ချစ်သူရနိုင်သော်လည်း ညစ်ပတ်သော မိန်းကလေးကိုမူ နှာခေါင်းရှုံု့ ချင်ကြသည်။ မသန့်ရှင်းသော မိန်းကလေးများ၏ အိပ်ခန်းမှာ အမှိုက်ဗုံးများ ပေါက်ကွဲထား သလို ကျောချစရာမရှိအောင် ရှုတ်ပွနေ တတ်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခု ပျောက်လျှင် လွယ်လွယ်နှင့် ရှာလို့မ ရတော့ပေ။ ၎င်းကဲ့သို့သော မိန်းကလေးသည် အပြင်ထွက်လျှင် … Read more
အိမျထောငျသညျတှေ သစ်စာမဲ့တတျကွတဲ့ အကွောငျးပွခကြျမြား …
သစ္စာမဲ့တတ်သူတွေရဲ့ အကြောင်းပြချက် စရိုက်လက်က္ခဏာ မိန်းမ တွေ ဖောက်ပြန် ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်များ… လူတွေပြောပြောနေတာ ယောကျ်ား တွေက သစ္စာ မရှိဘူး၊ ဆော် တကာ နဲ့ပတ်အိပ်ချင်နေတယ် ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတွေပါ။ မိန်းမတွေ (…..)ကိစ္စကြောင့် ဖောက်ပြန်တာနည်းပြီး …. သူတို့လိုချင်တာက ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာရှိမယ့်ယောကျ်ား နဲ့ သူတို့ ဘဝဖူလုံမှုရှိအောင် ပူပန်စရာမရှိအောင်ထားနိုင်တဲ့ ယော ကျ်ား လို့ပြောနေကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကောလဟာလ သက်သက်တွေပါ။ ခုတလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ယောကျ်ားလေး တွေပဲ နှိပ်တဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေ ဘယ်သူတွေသွားနေတယ်ထင်သလဲ။ ဘာတွေသွားပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ်ထင်သလဲ။ ဖောက်ပြန်တာ မိန်းမ . ယောကျ်ားမရွေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယောကျ်ား တွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မိန်းမ တွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ … Read more